विराज थापा : प्रतिगमन विरुद्ध सडकमा, १ महिना अघि अधिवक्ता, आज ७ मन्त्रीको पद चैट ! - Kantipath.com
सिन्धुपाल्चोक घर भएका २५ वर्षीय युवा अधिवक्ता विराज थापाले पूर्व माओवादीका ७ जना नेताको मन्त्री पद चट् गराइदिएका छन् । थापा नेकपा(माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)का भक्तपुर संयोजक समेत हुन् ।
मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । सांसद नरहेको व्यक्ति पटक–पटक मन्त्री बन्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ७ मन्त्रीको पद गएको हो । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीसँगै उनीहरूले पनि वैशाख ३१ गते शपथ लिएका थिए ।
अधिवक्ता विराज थापा अखिल क्रान्तिकारी भक्तपुर जिल्ला संयोजक समेत हुन् । उनले ल क्याम्पसबाट बीए एलएलबीको पढाइ पूरा गरेका छन् । उनी हाल भक्तपुर बस्दै आएका छन् । उनले एक महिना अगाडी चैत्रमा अधिवक्ताको लाईसेन्स लिएका हुन् । विद्यार्थी नेता थापालाई अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रंजित तामाङ्ग लगायतले पनि बधाई दिएका छन् । थापा केपी ओलीले संसद विघटन गरे पश्चात प्रतिगमनको विरोध गर्दै, भक्तपुरका विद्यार्थीको नेतृत्व गर्दै सडकमा पनि आएका थिए ।
Previous Previous post: उपनिर्वाचन अपडेट : साढे ४ बजेदेखि मतगणना गर्ने तयारी, कसले मार्ला बाजी ?
Next Next post: राष्ट्रियसभामा खिमलाल विजयी : रामबहादुर हारे !